नेपाल आज | विवाह अगाडीकाे याैनसम्बन्धबारे कसरी थाह पाउने ?
विवाह अगाडीकाे याैनसम्बन्धबारे कसरी थाह पाउने ?
महिलाले विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखे नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए नआएको वा दुखेन दुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे नफाटेको, पछाडिसम्म खुले नखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भए नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
जसरी आवश्यक भएको बेलामा योनी खुकुलो हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो, त्यसै गरी यौनसम्पर्कपछि योनीले आफ्नो पुरानै तनाव र आकार ग्रहण गर्ने कुरा पनि वैज्ञानिक सत्य हो । यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र ? हुँदैनन् नि । त्यसैले यौनसम्पर्कपछि योनी खुकुलो हुँदैन । एजेन्सी